विराटनगर । प्रदेश नं १ ले स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार, समृद्धिको आधार’ मूल नाराका साथ सचेतना अभियान आज देखि यहाँ सञ्चालन गरेको छ ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज बिहान आयोजित कार्यक्रममा ‘स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार समृद्धिको आधारमा मेरो वर्ष २०७५’ र ‘स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको वर्ष २०७५’ “जनमानसमा स्वास्थ्यको पहुँच हाम्रो अभियान आठ प्रतिबद्धता, स्वास्थ्य जीवनको आवश्यकता” भन्ने अभियानको अनावरण गरे ।
उक्त प्रतिबद्धतामा मुख्य मुख्यमन्त्री राईले हस्ताक्षर गर्नुहुर्दै स्वस्थ जीवन भएमा मात्र मुलुकको आर्थिक समृद्धि कायम हुने बताउँदै व्यायामले गाउँ समाजलाई सकारात्मक सोचको विकासमा प्रेरणा दिने बताए ।
उनले आफू खेलकूदमा रुची भएको र नियमित व्यायाम गर्ने गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले अगाडि ल्याएको आठ बुँद्धे प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सबैसँग आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले यो वर्ष विकास र समृद्धिको जग हाल्ने वर्ष भएको बताउँदै सिंगो मुलुकलाई रोगमुक्त बनाउने अभियान सफल बनाउने अभियानमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले प्रदेशलाई योगमय बनाउन प्रदेश सरकारको कार्यसुचीमा राखेको बताए । आठ बुँदे प्रतिबद्धतालाई योग शिविरमा प्रदेश सदस्य, सरकारका कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कसले गर्छ बढी हस्तमैथुन ? जान्ने पर्ने यस्तो छ कारण
काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरुमा यौन सन्तुष्टिका लागि मानिसहरुले साथि खोज्नु भन्दा हस्तमैंथुन वा सेक्स...
स्तन क्यान्सरले के सुन्दरतामाथि खेलबाड गर्न सक्छ त ?
शरीरको कुनै भागको कोशिकामा आउने असामान्य परिवर्तन तथा अनियन्त्रित बृद्धिलाई क्यान्सर भनिन्छ । बदल...
याद गर्नुहोस्, रक्सी र निन्द्रा राम्रा साथी होइनन्
काठमाडौं । ‘यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहानुहुन्छ भने मीठो निन्द्रामा समय खर्च गर्नुहोस...
कोशी अञ्चल अस्पतालमा पेइङको नाममा यसरी हुन्छ ठगी !
विराटनगर । विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पतालमा पेइङ सेवाको नाममा बिरामी ठगीमा पर्न थालेका छन् । नागर...
बच्चालाई पखाला लागेमा यसो गर्नुस
काठमाडौं । मौसम परिवर्तनसँगै ज्वरो आउने, टाइफाइड हुने, झाडापखालाजस्ता रोगहरू लाग्ने गर्छन् । विशे...
मिर्गौैला दिवसमा प्रधानमन्त्री ओलीको वाकाथन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली मिर्गौला दिवसको अवसरमा आयोजित वाकाथनमा सहभागी भएका छन् । ...